Fivoahana 'coral Google' miafina ao Geekbench miaraka amin'ny Snapdragon 855: ho Pixel 4 ve izany? | Androidsis
Fivoahana 'coral Google' miafina ao Geekbench miaraka amin'ny Snapdragon 855: ho Pixel 4 ve izany?
Fitaovana Google saro-pantarina mitondra ny anarana "Google coral" no hita tao amin'ny Geekbench. Ilay maodely dia toa iray amin'ireo maodely havoakan'ny orinasa amin'ity taona ity, satria voatanisa hitantana ny Android Q, ny kinova an'ny OS izay mbola tsy nambara ary mbola tsy nahatratra ny dingana fitsapana beta.
Ka ity mety ho kinova alfa amin'ny Pixel 4, izay azo inoana fa ho fitaovana voalohany hanasongadinana ny rafitra fiasan'ny Google ho avy, izay hahomby tsara Android Pie.
Araka izany, tsy naseho ny mpanodina ao am-paran'ny terminal. Raha ny tokony ho izy dia miseho ho "haran-dranomasina" fotsiny izy. Na izany aza, ny isa GeekBench sy ny refin'ny tsipika chipset amin'ny antsipiriany ao amin'ilay andrana dia manondro izany el Snapdragon 855 miandraikitra ny fanomezana fahefana ny telefaona andrana.
Pixel 4 voalaza fa ao amin'ny Geekbench
Ny isa tokana dia 3,296, raha 9,235 ny isa marobe. Ny roa amin'ireo isa ireo dia manodidina ny 10% ambony noho izay azon'ny chipset Snapdragon 845 ao amin'ny Pixel 3. Ka antony iray hafa hieritreretana fa ny fitaovana dia hampitaovana ny System-on-Chip farany an'ny Qualcomm.
Ny 'haran-dranomasina Google' dia hita koa ao anaty lisitra miaraka amin'ny RAM 6 GB, izay midika fa afaka mahita hatramin'ny 8GB na mihoatra amin'ny karazany ambony isika. Misy ihany koa ny tombantombana fa ity dia mety ho maodely Chromebook vaovao mbola mandalo fitsapana. Tsy maintsy miandry fanamafisana ofisialy isika vao hahalala hoe inona marina izany. Na izany aza, ny zava-drehetra dia manondro fa izy no telefaona voalohany an'ny orinasa amerikana, ka io no data voalohany naseho tamin'ny mpandimby ilay Pixel 3 malaza sy mampiady hevitra an'ny orinasa.
(Fuente | amin'ny alalan'ny)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fivoahana 'coral Google' miafina ao Geekbench miaraka amin'ny Snapdragon 855: ho Pixel 4 ve izany?